မဟန – ကြံ့ဖွံ့- ရွေးကောက်ပွဲ | MoeMaKa Burmese News & Media
3 Responses to မဟန – ကြံ့ဖွံ့- ရွေးကောက်ပွဲ
mankyi on April 8, 2012 at 2:04 pm
လူယုတ်မာ မောင်မောင်သိန်း ဒီသတင်းအမှန်ဆိုရင် တော်တော် ယုတ်မာတဲ့လူလို့ ဆိုရမယ် ။ အမှန်တရားကလည်း ပျောက်ကွယ်နေပြီလား ဒါမှမဟုတ် ဘာမှာ ပုန်းနေသလဲဆိုတာ အော်ဟစ်ရမယ့် အခြေအနေဖြစ်နေတယ်။ မင်း ကုသိုလ်ကံလေး ကောင်းတုန်း တော့ ငါလုပ်တာ အဟုတ်လို့ ထင်နေတယ်။ ကုသိုလ်ကံကုန်တဲ့ တစ်နေ့ မင်း အဲဒီဆရာတော်ရဲ့ အိမ်သာမှာ ဆရာတော် မစင်စားနေရတဲ့ လောက်ပြိတ်တာ မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပါတယ်ကွာ
yawna on April 8, 2012 at 4:39 pm
THUYA MYINT MG SOLD OUT THE MANY CELL PHONES LAST 15th YEARS AGO . WHO SAY GENTLE MAN THIS MINISTER ?
u aggbala on April 8, 2012 at 6:13 pm
မြန်မာနိုင်ငံ သံဃာ့မဟာနာယအဖွဲ အများစုဟာ အစဉ်အဆက် အာဏာရှင်တို့ရဲ့ခိုင်းဖတ်ပဲဖြစ်နေ၇တာပါ၊
ဘာမှလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး လာဘ်လာလ မျှော် ဘွဲ့ထူး ဂုဏ်ထူးမျှော်ပြီလုပ်နေရတဲ့ အကတိလိုက်စားတဲ့အဖွဲ့ပါ
စာပေမှာ အရေးအချင်းရှိပေမယ့် အာဏာရှင်တွေရဲ့ အသုံးချခံရတဲ့ ဆရာ ဖိုသူတော်တွေပါ၊
တကယ်ညစ်ပတ်တဲ့နေရာပါ အကတိထူပြောတဲ့နေရာပါ ရန်ကုန် ကမ်ဘာအေး ကုန်းမြေသည် မအေးပါဘူး၊ အန်မတန်ပူလောင်တဲ့နေရာပါ၊ အဆိုးဆုံးက ကသာကျောက်ထုံးကြီး ဘုန်းကြီး ဦးနိမလ က
သူ့ဟာ မဟန တွဲဘက်အကျိုးတော်ဆောင်ပါ၊ မန်းလေး ဘုရားတစ်ဆူရဲ့ဘဏ္ဍာတော်ဖြစ်ထိုက်မဖြစ်ထိုက်ပြသနာကို သူက ၀ိန့်စိန်သားဘက်ကို လာဘ်ယူပြီး ဘက်လိုက်တယ်လို့သိရတယ် အစည်းအဝေးမှာ သူက အများစုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပယ်ချပြီး ၀ိန့်စိန်သားကို ကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်ခုထိ အဲ့မှုက မပြီးပြတ်သေးဘူး၊ နာမည်ပျက်စာရင်းထဲပါတဲ့ကသာ ကျောက်ထုံးကြီး နိမလ ပါ၊ဒီသတင်းကို မဟန ကျောင်းဆောင်မှ လူပြန်တော်များမှ တစ်ဆင့်ကြားသိရသည်။